Ny Turkish Airlines sy Belavia dia nanao sonia fifanarahana codeshare
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Turkish Airlines sy Belavia dia nanao sonia fifanarahana codeshare
Enga anie 2, 2018
Belarusian Airlines, ny kaompaniam-pitaterana sainam-pirenena any Belarus, ary ny Turkish Airlines, mpitatitra sainam-pirenena any Torkia, dia nanambara ny sonian'ny fifanarahana codeshare, nanomboka ny 1 Mey 2018 lasa teo.
Amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa codeshare ity, ny Turkish Airlines sy Belavia dia hampiditra ny kaody fandefasan-dry zareo ao Istanbul - sidina Minsk vv ampiasain'ny roa tonta.
“Amin'ny maha Turkish Airlines anay, faly izahay fa mpiara-miasa amin'ny codeshare miaraka amin'i Belavia. Mino izahay fa, ity fifanarahana ity dia hanatsara ny fifandraisantsika amin'ny mpitondra sainam-pirenena Belarus, ary hanatsara ny fiaraha-miasa ara-barotra amin'ny sehatra manaraka. Amin'ny fampidirana ireo sidina iraisan'ny roa tonta ireo, ny mpandeha dia mankafy safidy hafa amin'ny dia lavitra eo Belarus sy Torkia. ” hoy i Bilal Ekşi, lefitra mpisolo toerana & CEO an'ny Turkish Airlines.
“Minsk - Istanbul no iray amin'ireo làlana manan-danja indrindra amin'ny tambajotram-pitomboan'ny Belavia-Belarusian Airlines, ary mino izahay fa io fiaraha-miasa amin'ny Turkish Airlines io dia hitarika amin'ny fampivoarana bebe kokoa ny fivezivezena sy ny fizotran'ny fialamboly, tsy eo anelanelan'i Torkia sy Belarus ihany, fa mihoatra ny Istanbul sy Minsk. ” Anatoly Gusarov, Tale jeneralin'ny Belavia-Belarusian Airlines no nanamarika.
Amin'ny voalohany, samy mametraka ny kaody ao Istanbul - samy sidina Minsk vv samy mpitatitra. Ny fampidirana ireo teboka mihoatra ny / sy ny làlana hafa dia azo dinihina ihany koa ho dingana faharoa aorian'ny fampandehanana an'ity fifanarahana codeshare ity.
Ny sidina iraisana dia hanolotra fifandraisana haingana sy mora ho an'ireo mpandeha miala ao Istanbul, tanàna Tiorka lehibe indrindra ary koa toerana fampitahana manan-danja ao amin'ny faritra, mankany Minsk. Ankoatr'izay, amin'ny fiheverana ny firafitry ny fandaharam-potoanan'ny mpitatitra sy ny fifanarahana miasa mifamaly, ireo sidina ireo dia hahafahan'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina hankafy ny fifandraisana tsy mitombina ao amin'ireo hub-dry zareo avy.
Ny Turkish Airlines, manidina any amin'ny firenena maro kokoa sy ny toeran-tany iraisam-pirenena noho ny orinasam-pitaterana an'habakabaka hafa eran'izao tontolo izao, dia miasa amin'ny toeran-tseranana mpandeha sy entana maherin'ny 300 any amin'ny firenena 121.
Belavia indray dia manolotra fifandraisana fohy sy mety ao amin'ny seranam-piaramanidina Minsk miaraka amin'ny fiainganana isan'andro amin'ny toerana 50 any Eropa, Federasiona Rosiana ary Azia Afovoany.
Vaky ny varavarankely amin'ny faritra atsimo andrefan'ny fiaramanidina mandritra ny sidina: fiantsonana "tsy misy maika" any Cleveland
Manala ny karipetra mena ny Extended Stay America Hotels rehefa miara-miasa amin'ny sarimihetsika Pup Star: World Tour